Orinasa mpamokatra sy mpamatsy China ND300 | Jianma
Taranaka vaovao amin'ny teknolojia fikarohana asidra niokika
Teknolojika fikarohana asidra nokramika isimetera milimetatra dia teknolojia vaovao momba ny asidra nokleika haingana izay novolavolain'i nederbio ho an'ny fangatahana fitadiavana haingana eo an-toerana, izay afaka manome valiny fitadiavana asidra nokleary marina, haingana, mora ary mahay.
Ity haitao ity dia manambatra ny fanamafisana ny asidra niokleika sy ny fandrefesana ny colorimetric ho lasa dingana iray, mamita ny asa fanamafisana ny asidra niokleika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, ary afaka mitsara mivantana ny valin'ny fikarohana amin'ny maso mitanjaka.
Io no sehatra haitao tsotra sy mora ampiasaina indrindra hamantarana ny asidra niokleika.
Ny detector asidra nukôlisôma isoterma nd300 dia mifototra amin'ny fivoarana tsy miankina sy ny teknolojia mpamantatra asidra nadiônôma isimetimia colorotherric. Natao manokana ho an'ny famaritana asidra niokleika haingana.
Marina, haingana, mora entina ary mora ampiasaina izy io. Izy io dia afaka mamita mora foana ny asan'ny detectika asidra nokleika ary manampy anao amin'ny fitadiavana asidra nokleika amin'ny fotoana tena.
Ny fahamarinan'ny fanaraha-maso ny mari-pana dia 0.1 ℃, fifehezana ny mari-pana avo lenta ary singa optika. Ny tahan'ny fifandrifian-kevitry ny fandrefesana loko sy ny fluorescence dia 100%;
Ny fandikana hazavana azo jerena dia azo tanterahina amin'ny fomba tsotra, ary ny valiny dia azo aseho sy atao pirinty amin'ny zavamaneno;
Tsotra, kely habe, lanja maivana, efijery interface-friendly, efijery azo ifandraisan'ny mpampiasa, mety amin'ny fizahana haingana sy ny saha;
Natao pirinty teo no ho eo ny valiny.
Fampiharana: fanandramana fiarovana ny sakafo (famaritana ireo zavamiaina bitika pathogenika, transgenika, hena azo avy amin'ny hena)
Aretina biby (fiompiana, vokatra anaty rano, fikarohana aretina momba ny biby)
Fitsaboana ara-pitsaboana, fikarohana ara-tsiansa, sns
>> Ireo masontsivana momba ny vokatra
Fampisehoana fototra MODELY ND300
lafiny 320 * 280 * 125mm
lanja 2,5 Kg
tabataba 20 Decibel
Ny mari-pana manodidina 4 ~ 35 ° ℃
Sarony mafana na inona na inona
Parehitra mifandraika Fahafahana santionany Lavaka 32 * 0.2ml
Fitaovana azo ampiharina 0.2mlS Tube tokana, 8 * 0.2ml
kitapo fitsapana Famaritana isimetera miloko mena
fanaraha-maso marina 0.1 士 ℃
Fanamiana ny maripana ± 0,2 ° ℃
Fahitsiana ny mari-pana 0.1 ± ℃
loharano maivana Famirapiratana avoLED
Fanaraha-maso ny asa fomba fanaraha-maso Efijery mikasika loko 7 santimetatra
Mampiseho izany ny valiny Fanehoana ny fandikana amin'ny fotoana tena izy ny milina, fanontana thermal synchronous, fivoahan'ny peripheral
Fomba fandikana ny valiny Ny fahitana maso amin'ny fotoana tena izy dia azo tanterahina amin'ny hazavana hita maso (ny valiny dia azo adika amin'ny fakana sary ny zavamaneno, ary ny valiny dia azo jerena miaraka amin'ny maso mitanjaka amin'ny fotoana iray)
Fitehirizana valiny Azo anontaniana izy, tehirizina ary aondrana
lozisialy Ny parameter dia azo apetraka ho an'ny programa fanehoan-kevitra, toy ny ora amin'ny fihetsiky, ny mari-pana amin'ny hafanana, sns.; ny lavaka samy hafa dia azo soloina anarana; ny valin'ny fitsapana dia azo tehirizina ary aondrana; tokonam-baravarana azo apetraka; misy ny fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy sy ny fiasan'ny fiarovana ny hafanana.
Previous: Mpivarotra ambongadiny tsara Ce - SARS-CoV-2 (2019-nCoV) vahaolana feno - jianma
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Kitapo fitrandrahana asidra niokleary haingana, Kitapo fitsapana haingana an'i China, Canine Parvovirus (Cp), Kitapo tsy misy fitrandrahana,